Ukucubungula Okuphezulu Ukuphakama Kwama-Large Ceramic Tube China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > I-Metallized Tube ye-Ceramic > Ukucubungula Okuphezulu Ukuphakama Kwama-Large Ceramic Tube
Sakha amakhemikhali amaningi alumina akhazimulayo angasetshenzisiwe okusetshenziselwa ukusetshenziselwa ukusetshenziswa kwe-vacuum breaker, izigubhu ze-electron eziphazamisayo, iziphazamisi zokugcoba, izigubhu zegridi zamandla nezicelo ezifanayo lapho i-ceramic-to-metal, i-ceramic ku-ceramic yokujoyina ubuchwepheshe bamandla obuhle obuhlanganisayo nobuqili kuyadingeka .
Isikhungo sethu sigxile kakhulu kwi- film molybdenum / tungsten ne-tungsten eqinile ye-film metallization kuma-95% alumina ceramics. Futhi, sithuthukisa ukuhlanzeka okukhulu kwe-alumina, njenge-99% i-alumina, i-zirconia ne-beryllia njengesidingo samakhasimende. Sisebenzisa i-electro noma i-electroless nickel / isiliva / igolide njengesigxobo sokukhethwa phezu kwe-metallization. Umphumela ohlelweni olusheshayo kalula ngokubambisana-isiliva, i-co-op ehlanzekile, igolide kanye namanye ama-alloys ajwayelekile.
Ububanzi obukhulu kunawo wonke bufinyelela ku-800 mm kanti ubude obude kakhulu bungaba ku-1000 mm. I-plating ejwayelekile njengezansi:
1. I- ceramic enkulu + ye-Mo / Mn metallization 2. I- ceramic enkulu + Mo / Mn metallization + I-nickle plating